Google Chrome ohuru 55 di ugbu a maka Mac | Esi m mac
Ihe Google Chrome ohuru di ugbu a maka Mac
N'ezie m nwere ike ikwu na m na-enye obere Google Chrome na Mac m, mana nke a bụ ihe gbasara onwe onye ọ bụla onye ọrụ na o doro anya na amaara m ọtụtụ ndị na-eji ya na Mac ma nwee afọ ojuju na ya. Ugbu a Google weputara Google Chrome 55 ohuru maka Mac, Windows na Linux isi ihe dị iche bụ na na ụdị a nke ihe nchọgharị Flash ọ nwere nkwarụ kpamkpam.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ, anyị nwere ike ịgbalite ya site na ntọala ihe nchọgharị ahụ, mana nke a bụ ihe mụ onwe m anaghị akwado onye ọ bụla belụsọ ndị ọrụ niile chọrọ ịnweta Flash maka ọrụ ma ọ bụ nsogbu ndị yiri ya, n'ọnọdụ ndị ọzọ niile ọ kachasị mma ịhapụ ya ka agbanyụọ iji zere nsogbu.
Ezi ihe banyere inwe Flash agbanyụọla na ndabara bụ na ọ bụrụ na anyị enweta weebụsaịtị yana Flash, ihe nchọgharị ọhụrụ ahụ ga-ajụ anyị ma anyị chọrọ ịgbalite ya iji nweta ọdịnaya ma ọ bụ na ọ bụghị, mgbe ahụ ọ bụ okwu nke onye ọrụ ọ bụla mee ya ma ọ bụ ghara. Enwere m ike ikwu nke ahụ Ejibeghị m Flash na Mac m ogologo oge na m na-atụ uche ya dị ka ọ na-adịghị chọrọ n'ihi na ọtụtụ nke weebụsaịtị m nweta na m na-adịghị mkpa ya maka ọrụ ma, ya mere otu obere nsogbu.
Chrome 55 na-eji HTML5 maka ibe anyị na-agagharị Ya mere maka ndị ọrụ ahụ ejiri ya na-eji Chrome ma ọ bụ chọrọ ịgbanwe ya maka ihe nchọgharị macOS, Safari, nke a bụ nhọrọ dị ukwuu. Ọ bụrụ na ịchọrọ iji aka rụọ ọrụ Flash na ya, ihe anyị ga-eme bụ ịnweta nchọgharị Mmasị> Nzuzo> Ntọala ọdịnaya ma mee ka Flash rụọ ọrụ. Ma ọ dịghị mkpa, n'ezie ...
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Ihe Google Chrome ohuru di ugbu a maka Mac
Egwuregwu egwuregwu a ma ama bụ Isi Nkata bịara Mac
Otu afọ ọzọ apụl nke ụlọ ahịa Apple na-acha ọbara ọbara